Tim Burton: iray amin'ireo famoronana lehibe amin'izao androntsika izao | Famoronana an-tserasera
"Tim Burton Alice In Wonderland Movie Standee Billboard 3275" nataon'i Brechtbug dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-ND 2.0
Mpamorona horonantsary malaza tahaka ny Nofy ratsy alohan'ny Krismasy, Edward Scissorhands o Charlie sy ny orinasa sôkôla, Tim Burton dia iray amin'ireo famoronana mamiratra indrindra amin'izao androntsika izao.
Sahy mianatra bebe kokoa momba ny asany mahaliana ve ianao? Andao ho any!
1 Ny sarimihetsika dia tototry ny famoronana
2 Ny sangan'asany rehetra dia manana halo mainty
3 Singa miverimberina
4 Ny fahazazany nahaliana
Ny sarimihetsika dia tototry ny famoronana
Raha misy sarimihetsika feno fahalavorariana na aiza na aiza dia ireo no an'i Tim Burton. En Nofy ratsy alohan'ny Krismasy (horonantsary sarimihetsika malaza eran-tany izay namoronana varotra maro) afaka mahita tarehin-tsoratra tany am-boalohany isika, toy ilay taolana malaza Jack skellington.
Sarimihetsika mahafinaritra iray hafa koa Edward Scissorhands, izay manana ny maha izy azy, miaraka amina karisma lehibe, dia manana hety fa tsy tanana.
Charlie sy ny orinasa sôkôla Sarimihetsika hafa tsy azonao adino izy io, miorina amin'ny tantara nosoratan'i Roald Dahl.
Sarimihetsika Tim Burton misimisy kokoa Batman, Big Fish, Corpse Bride, Alice in Wonderland, Aloky ny maizina, maso lehibe, loaka matory y Frankenweenie.
Ny sangan'asany rehetra dia manana halo mainty
Ny sinema gothika sy maizina dia tsy tapaka amin'ny sarimihetsika Tim Burton rehetra. Na dia feno loko aza ny maro amin'izy ireo, manana fikitika maizina sy manjombona foana izy ireo.
Ankoatr'izay, saika ny tarehin-tarehiny mampivarahontsana dia manana faribolana maizina lehibe sy refy (na lava loatra na fohy loatra, manify na matevina loatra).
Amin'ny sarimihetsika marobe dia misy singa maro miverimberina, toy ny: alika maty (tia ireo biby ireo), badom-baravarana, alikaola, hazo miolakolaka, kianja mainty sy fotsy, sns.
Ny fahazazany nahaliana
"Tim Burton - Fiainana an-tsary" avy amin'i Deutsche Bank dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-ND 2.0
Fiandohana California, Tim Burton niavaka noho ny maha zaza saro-kenatra sy introvert azy (Toy izao ny mazoto ireo mazoto amin'ny tantarany), izay tia milalao hatsikana macabre. Ohatra vitsivitsy amin'izany: fampitahorana ireo ankizy hafa milaza fa ho avy ny vahiny, maka tahaka ny famonoana eo amin'ny manodidina amin'ny famaky ...
Ho fanampin'izany, tiany ihany koa ny tontolon'ny hosodoko, ny endrika ary ny sinema.
Inona no andrasanao hahita ny sarimihetsika mahavariana?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Tim Burton, mpamorona lehibe amin'ny fotoanantsika